Yemahara inogara yakanaka, uye kana iyo yemahara app isisina yemahara (kana kana yemahara vhezheni yacho ikave yakaganhurirwa isingashande), saka unofanirwa kusarudza kuti wobhadhara here kana kuenderera mberi. Izvi zvakaitika ne Evernote manotsi maneja makore mashanu apfuura, uye ikozvino yave nguva yevashandisi veyakakurumbira password password maneja LastPass kuita zvakafanana sarudzo. LastPass iri kuchinja yayo yemahara vhezheni kuitira kuti izongoshanda pane imwe mhando yechigadzirwa - ingave komputa yako kana nharembozha yako. Kana iwe, kufanana nevazhinji vedu, shandisa zvese foni uye komputa, ipapo uchafanirwa kutanga kubhadhara madhora matatu pamwedzi kana kutsvaga imwe nzira.
Kana iwe uchida kusatombobhadhara zvachose, kune vamwe vatariri vephaswedi kunze uko vane mahara maBhaibheri anogona kukushandira zvirinani. Uye kune, hongu, dzimwe nzira. Mazhinji mabhurawuza, akadai seChannel, Microsoft Edge, uye Firefox, vane avo vamene password mamaneja. Uye zvakare, mazhinji ekuchengetedza maapplication akadai seNorton anopa avo vega mamaneja, saka kana iwe uchinyoresa kune imwe, unogona kunge uine password password maneja.
Asi kana iwe ukasarudza kushandisa yakazvimirira password maneja, heano mashoma aripo izvozvi. Hatisati tavaedza; uku kungo tarisa kwenguva pfupi kusvikira tazowana mukana wekupa mazano.
Bitwarden inozivikanwa-yakavhurika-sosi password password iyo inopa yakasarudzika sarudzo yezvinhu, kusanganisira kusevha zvisingagumi zvinhu, kuyananisa pamadhizaini, uye kugadzira mapassword. Zvekushandisa zuva nezuva-password, Bitwarden inogona kunge iri imwe nzira yakanaka.
Mimwe mitengo: Kwemadhora gumi pagore, unogona kuwedzera 10GB ye encrypted faira yekuchengetedza uye maviri-nhanho login, pakati pezvimwe zvekuwedzera.
Zoho Vault, inova imwe yemhando dzakasiyana dzezvigadzirwa zveZoho, ine vhezheni yemahara inosanganisira chengetedzo yemapassword nemanotsi, kuwana kubva kumacomputer uye nharembozha, kuvimbiswa kwezvinhu zviviri, uye kugadzirwa kwepassword, pakati penhamba inonakidza. zvimwe zvinhu.
Mimwe mitengo:Zoho yakabhadharwa chirongwa, icho chinotanga pa $ 1 / mwedzi pamushandisi, chinopa sarudzo dzebhizimusi senge kugoverana kwepassword uye kunyeverwa kwekupera.
KeePass ndeimwe yemahara yakavhurika-sosi password maneja, asi kutonga kubva kune yayo webhusaiti, zvingave zvakaoma zvishoma kune vashoma vane hunyanzvi vashandisi kutora. Hapana chinochengetwa mugore, saka nepo icho chichigona kuve chakachengetedzeka (unogona kuchengeta mapassword ako mune tenzi kiyi-yakavharwa yakavharidzirwa dhatabhesi), zvakare iri nyore. Nekudaro, kana iwe usine hanya nemaoko uchichinjisa password yako dhatabhesi kubva kune imwe kifaa kuenda kune imwe, izvi zvinogona kuve zvakakodzera kuyedza.
Mimwe mitengo: hapana
LogMeOnce yemahara vhezheni inopa mapassword asina muganho uye shandisa pazvinhu zvisina muganho, pamwe nekuzadza, sync, password kugadzirwa, uye zviviri-chinhu chechokwadi. LogMeOnce inoshandisa kushambadzira kubhadharisa vhezheni yayo yemahara, saka izvo zvinogona kuve kudzoserwa, zvinoenderana nekushivirira kwako kushambadzira.
Mimwe mitengo:Zvimwe zvinowedzerwa zvinotanga pamadhora 2.50 pamwedzi uye zvinosanganisira kuwana zvechimbichimbi, kuwedzerana nekugovana pasiwedhi, uye rutsigiro rwehunyanzvi hwekutanga, pakati pevamwe
NordPass ine yemahara vhezheni iyo inosanganisira mapfumo mapassword uye kuenzanisa pane ese madhijitari. Kunyangwe pasina muganho pane huwandu hwemidziyo yaunogona kushandisa, imwe chete ndiyo inogona kushanda panguva - saka, semuenzaniso, kana iwe ukaishandisa pafoni yako, unenge wabuda kunze kweshanduro yekomputa yako.
Mimwe mitengo:Iyo yekutanga vhezheni yeNordPass inoita kuti iwe uve kusvika kumatanhatu maakaunzi anoshanda anomhanya panguva, uye inosanganisira chengetedzo yekugovana chinhu uye yekuputsa data scanner, pakati pezvimwe zvinhu.
RoboForm yanga iriko kwechinguva, kunyange zvisati zvambozivikanwa seLastPass kana 1Password. Iyo yemahara vhezheni inopa risingagumi mapassword, fomu yekuzadza, uye emergency kuwana, pakati pezvimwe zvinhu. Nekudaro, haibvumirane pamidziyo, izvo zvinogona kuve kusagadzikana kuri pachena.
Mimwe mitengo: RoboForm Kwese kupi kunodhura $ 18 kwegore rimwe chete kunyoreswa, uye iyo inokutendera iwe kuyananisa pamidziyo yese, kuita gore kuchengetedza, uye kushandisa maviri-chinhu chokwadi, pakati pezvimwe zvinhu.
Kuongorora kweBitwarden: Yekutanga password maneja iyo yakanaka kukosha
Iyo Yakanyanya Dhata Yekuona Zvinhu